Ukuqonda kwamakhasimende ku-Digital Age | Martech Zone
Ukuthola impendulo efanele yamakhasimende — nokuyithola ngokushesha — kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili empumelelweni yebhizinisi. Impela, ukuzithathela wena kunzima, abacwaningwayo abenza ucwaningo abakaze bathenjiswe, kanye nezikhathi zokuthola ukuqonda kwamakhasimende bazizwa yinde kakhulu ukwenza umehluko ebhizinisini. Kepha, kunendlela engcono yokuthola imininingwane edingeka kakhulu yamakhasimende eqinisekisa umkhiqizo wakho nokuqondiswa kwebhizinisi.
Inhlanganisela yetheknoloji yesimanje ihlangane ukudala imininingwane engcono, esheshayo, eshibhile. Izisombululo ezinhle kakhulu zokuqonda kwamakhasimende zisebenzisa i-smartphone. Isigaba esisha semikhiqizo sibizwa ngezixazululo ze-Research-as-a-Service (RaaS), futhi imikhiqizo emihle kakhulu ye-RaaS igxile ekuqedeni ukukhungatheka okuphathelene nezindlela zendabuko zokwenza ucwaningo olusezingeni eliphezulu. Izixazululo ze-RaaS zinika amandla abacwaningi, osomabhizinisi, abaphathi bemikhiqizo, abaklami nabathengisi ukuthi baphinde bagxile kokusemqoka kakhulu; ukulalela amakhasimende namathemba, nokuhlanganisa ukuqonda kwabantu ku-UX nakumigwaqo womgwaqo womkhiqizo.
Lapho i-Qualitative Research iphukile
Njengoba uMarc Andreesen asho ngokudumile, "isoftware iyadla umhlaba." Futhi, asikho isibonelo esikhulu kunenqubo, amathuluzi kanye nomugqa wesikhathi womkhiqizo wokwakha. Isikhathi seLean-Agile sidale ukuqhuma kokuthuthukiswa komkhiqizo okuqhutshwa yidatha kuzo zonke izimboni, kanye namathuluzi wokufaka amakhodi, ukuklama, ukuhlola, ukuhlaziya nokuthumela imikhiqizo - ipayipi lokukhiqiza liguquke ngokuphelele, ngaphandle kokudala ukuqonda kwabantu. I-Big Data kanye ne-Artificial Intelligence ikhombisile ukuthi ithembisa ukuthi ucwaningo olusezingeni lungasasebenzi, kepha zonke lezo zithembiso azigcwalisekanga futhi nesidingo sokuqonda kwabantu sisekuhle, futhi imigqa yesikhathi namathuluzi kuphelelwe yisikhathi ngokuthuthukiswa komkhiqizo wanamuhla. Kuze kube muva nje, ucwaningo lwekhwalithi luye lwasuswa ngendlela efanayo lwaluneminyaka engamashumi amabili edlule, yingakho lokho kungasasebenzi:
Izindlela zendabuko zokwenza ucwaningo lwamakhasimende ziyabiza
Ukuphathwa kwempahla kwenza ukuthola ukuqonda kocwaningo kusetshenziswe isikhathi futhi kunqunyelwe
Ukufuna imininingwane yamakhasimende ngezigaba ezahlukahlukene ze-R & D kuphazamisa isivinini, ijubane lokumaketha
Izinkampani zidinga ukufinyelela kumakhasimende azo, eduze ngokwanele akubali
Kusetshenziswa ubuchwepheshe obunqenqemeni ukunqoba izinselelo zezinto ezisetshenziswayo ngokomlando ezicwaningweni ezisezingeni, izixazululo ze-RaaS zinika amandla abacwaningi ukuthi baphinde bagxile kulokho okubaluleke kakhulu: ukwenza ucwaningo lwabo nokwenza imininingwane engenza umehluko wangempela.
Izindaba ezimnandi ukuthi ukwamukela ubuchwepheshe obusha bokucwaninga akusona isinqumo esisha, esinemfashini. Izinkampani ezihola phambili embonini zamukela ubuchwepheshe obusha ukusiza ukudala nokufaka ucwaningo olusezingeni eliphezulu ekuthuthukisweni komkhiqizo nokukhangisa, ngokushesha okukhulu futhi kaningi. Futhi nansi imfihlo enkulu: Abathengisi nabaholi bamabhizinisi ezinkampanini ezisezingeni eliphezulu emhlabeni wonke, kusuka kwaSamsung, LG, Verizon, Machine Zone naseHyundai - bakunyaka wabo wesibili ogcwele wokusebenzisa amathuluzi eRaS ukuguqula amabhizinisi abo, bahlangane futhi badlule okulindelwe amakhasimende. Izixazululo zeRaaS manje seziyingxenye yokuphathwa kwemikhiqizo nezindlela ezinhle kakhulu ze-R & D, elinye ibhokisi emifanekisweni ye-Growth Stack ebalaza amathuluzi nezinqubo ezidingekayo zokwenza imikhiqizo emihle.
ama-methink aletha ucwaningo-njenge-isevisi
Inkampani esekwe eSilicon Valley i-methinks yisixazululo sokucwaninga sesikhathi esizayo. Ngokusebenzisa indlela yokuqala ehamba phambili kanye nohlelo lokuphrinta olunolaka olukuxhumanisa nabathengi nochwepheshe abaqinisekisiwe, ungathola imininingwane esheshayo yengxenyana - eyodwa-yesikhombisa, ukuze ibe ngqo - yezindleko.
i-methinks iba nomthelela omkhulu embonini ye-R & D yama-trillion amaningi ngokwenza ukuqinisekiswa kwamakhasimende kube yinkqubo encane efike ngesikhathi, esebenza kahle futhi engabizi ekuletheni cishe noma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo emakethe. Izindleko, isikhathi kanye nokusetshenziswa kwempahla akusona izithiyo ekutholeni imibono yabathengi. Ngenxa yalokhu, imvamisa yokwenza nokusebenzisa ucwaningo lwekhwalithi kufanele ikhuphuke futhi iguqule izindlela ezihamba phambili ezimbonini eziningi, emhlabeni jikelele.
i-methinks isiza noma iyiphi inkampani eqondiwe, ithole futhi ixoxe namakhasimende namathemba ngezingcingo zevidiyo zobuso nobuso. Lolu cwaningo lwekhwalithi olusetshenzisiwe lusiza amabhizinisi ukuthi afunde kumakhasimende awo ngezingxoxo ezisebenza kahle, ezingabizi kakhulu, ubuso nobuso ezingamamodeli, ezirekhodwayo, ezibhalwe phansi, ezichazwe futhi ezihlelwe kalula futhi ezabiwe ukuze kufundwe ngokushesha, kwenhlangano. Ipulatifomu esekwe ku-RaaS ivumela abacwaningi ukuthi benze izingxoxo bukhoma, ucwaningo lwekhwalithi kanye nezifundo ze-longitudinal, okuvumela ukuqonda kusuka ekusetshenzisweni komkhiqizo okuyisisekelo kuya ekuqondeni okungahambisani nokusetshenziswa komkhiqizo komuntu okutholakala kuphela ngemizamo yocwaningo lwesikhathi eside.
ama-methinks athola impumelelo yokuqala esekela izinhlanganisela zebhizinisi lomhlaba jikelele, ziletha abathengi baseMelika ezinhlakeni ezinkulu zamazwe omhlaba ku-elektroniki yabathengi, ezenzakalelayo, imidlalo, isoftware kanye nabezindaba. Muva nje, ama-methinks asebenziswe kaningi ngamabhizinisi agxile e-US, ikakhulukazi lawo asezingeni lokuqala le-R & D. I-methinks ifuna ukuguqula indlela ucwaningo lwezimakethe olwenziwa ngayo ngokunika amandla osomabhizinisi, abacwaningi abangochwepheshe, abaphathi bemikhiqizo, abaklami noma yimuphi umholi we-R & D ukufaka ngokushesha futhi ngendlela engabizi imininingwane yamakhasimende ebhizinisini labo. Noma imuphi umsebenzisi we-methinks angahlela futhi arekhode izingxoxo ngaso leso sikhathi, athathe amanothi, abeke uphawu kumininingwane yabathengi, nokuningi. Wonke amavidiyo anesitembu sesikhathi futhi agcinwa emafini ukuze afinyeleleke kalula, ahlelwe futhi abiwe.
Indawo Yokucinga Emakethe
Umehluko omkhulu wokunikezwa kwe-methink yichibi labahlanganyeli beqembu lokugxila ngaphambili. Ngama-400,000 ahlolwe ngaphambilini Abacabangayo ikakhulukazi e-United States, imininingwane yamakhasimende iyatholakala ngokufunwa, ilungele ukunikeza imibono ebalulekile nokuphendula. i-methinks inikela ngezihlungi ukusiza abacwaningi ukuthi babone inani labantu ababhekiswe kubo, kubangele izimpendulo ezisheshayo echibini labamele ukhetho abafanele ababelana ngokutholakala kwezingxoxo.
Kusukela eziqalisweni ezintsha sha kuya kumabhizinisi aneminyaka eyikhulu ubudala, ukuqonda ukuthi amakhasimende afunani futhi akudingani kubaluleke kakhulu empumelelweni. i-methinks iguqula ngokuphawulekayo izikhathi nezakhiwo zezindleko zocwaningo. Umgomo wethu ukukuxhuma namakhasimende wakho ohlosiwe ukuze ukwazi ukubuza imibuzo ebalulekile futhi ufunde. Senze isisombululo esilula, futhi esihle kunenkinga eyinselelo enkulu yokwakha ipulatifomu eqinile, uhlelo lokusebenza olusebenziseka kalula kanye nemakethe enamandla ye-Thinkers.
UPhilip Yun, umsunguli we-methinks kanye ne-Chief Product Officer
ukutholakala kwe-methinks nentengo
i-methink iyatholakala manje futhi iqala ku- $ 89 nge-interview ngayinye. i-methinks inikeza imodeli ye-pay-as-you-go, ngakho-ke abacwaningi banekhono lokuzungeza noma ukunweba njengoba izidingo zabo zocwaningo zingashintsha. Abaphenyi banganikeza abaCabangi babo futhi baqhubeke nokunciphisa izindleko zabo ezihambisanayo ngokukhokha imali ephansi yesikhulumi. Amakhasimende emabhizinisini amakhulu - noma kumakhasimende adinga ucwaningo olususelwa kumaphrojekthi - angangena ku-methink's suite yamakhono ocwaningo kufaka phakathi ukulinganisela kobungcweti, ukuhlaziywa nokuthuthukiswa kwesethulo. Ngeminye imininingwane vakashela: imethinks.io
Iphepha Elimhlophe: Akusilo Lonke Ucwaningo Olwenziwe Lulinganayo
Ithimba le-methinks lifuna ukubhekana nesihloko semininingwane yamakhasimende eminyakeni yedijithali, ngakho-ke sakha iphepha elimhlophe Akusilo Lonke Ucwaningo Olwenziwe Lulinganayo.
Ukulanda Akukona Konke Ukucwaninga Okudaliwe Kulingana
Sicela ulande, ufunde, futhi ungazise ukuthi ucabangani. Futhi uma unesifiso sokubona i-RaaS isebenza, siyajabula ukukwenza ngikunikeze idemo or qala isilingo samahhala.
Tags: ukuqonda kwedijithalilogisticsUMarc Andreesenukusetshenziswa komkhiqizoisixazululo sokucwaninga sekhwalithiucwaningo lwekhwalithir & ducwaningo nentuthukoabacabangi
Aaron Burcell, Isikhulu Esiphezulu se- ubuchwepheshe be-methinks, unolwazi olungaphezu kweminyaka engamashumi amabili ekukhuliseni ukuqala kwamavidiyo, futhi wayengumeluleki wokuqala we-methinks kanye nekhasimende lokuqala. Phambilini ubephethe ezikhundleni eziphezulu zokumaketha, ezokusebenza nokukhula eGrockit (etholwe nguKaplan), umholi wamavidiyo omculo uVevo noMarcus nguGoldman Sachs. Muva nje, uBurcell usebenze njenge-COO ne-CMO yeLoop Media, ekuqaleni konyaka ehlanganiswe neFogChain, inkampani yesoftware edayiswa esidlangalaleni ezinze eSilicon Valley.
Izibikezelo Zokukhangisa Zasendaweni ze-2020 kanye Namathrendi
Yimiphi Imibuzo Edinga Ukuphendulwa Ukuhlola Isu Lakho Lokukhangisa Langaphakathi?